FAQS - Buddhatrends
के म डिलिवरीमा नगद तिर्न सक्छु? / म तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा पैसा सिंक गर्न सक्छु किनभने मेरो क्रेडिट कार्ड छैन।
म डराइरहेछु हाम्रो सञ्चालनहरू केवल क्रेडिट / डेबिट कार्ड लेनदेन र पेपाल को लागी मात्र सीमित छन्। यो सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रो ग्राहकहरूले उनीहरूको उपभोक्ता सुरक्षा पाउनु र हाम्रो व्यवसायलाई पनि मान्य छ। भविष्यमा हामी डिलीवरी मा नगद स्वीकार गर्न सक्नेछौं। यदि तपाइँसँग दिइएको भुक्तानीको कुनै पनि तरिकाहरू छन् भने तपाईंले पहिले भुक्तानीको साथ सहयोग गर्न कसैलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ :)
पेपालले क्रेता सुरक्षा प्रदान गर्दछ र सुरक्षित गेटवे र राम्रो रिफन्ड नीतिहरू प्रदान गरेर उपभोक्ताहरूलाई समर्थन गर्दछ। यसकारण हामी क्रेडिट कार्ड जोखिम बिना सुरक्षित रूपमा तपाईंको लेनदेनको पूरा गर्न पेपाल को प्रयोग गर्न को लागी सहयोग गर्दछौं।
यदि तपाइँसँग एक पेपाल खाता छ भने, Paypal सँग चेकआउट र तपाइँको खरीद अनुसार तदनुसार लग इन गर्नुहोस्।
के हो भने मसँग पेपाल खाता छैन ?!
चिन्ता नगर्नुहोस् किनभने तपाइँले भुक्तानी गर्नको लागि पेपैल खाताको स्वामित्व गर्न आवश्यक छैन: तपाइँले तपाइँको क्रेडिट कार्डको डेटा सिधा पेपैलमा प्रविष्ट गर्नुहुनेछ र तपाईंको भुक्तानी पूरा गर्न सक्नुहुनेछ। तिमीपेपैल खाता रेजिस्टर गर्न आवश्यक छैन.
1) "बचाउन वा क्रेडिट कार्डको साथ" विकल्प बचाउनुहोस् "विकल्प छान्नुहोस्
यदि तपाईंको PayPal पृष्ठले निम्न रूपमा हेर्छ भने, "डेबिट वा क्रेडिट कार्डसँग भुक्तानी गर्नुहोस्" वा "अतिथिको रूपमा जाँच गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
2। तपाईंको क्रेडिटकार्डको डाटा इन्टर गर्नुहोस्
ठेगाना, इ-मेल र फोन नम्बर तपाईंको देशको आधारमा पनि अनुरोध गर्न सकिन्छ।
जब तपाईं सकिएमा, "समीक्षा र जारी राख्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
3। "अब" क्लिक गर्नुहोस्
4। क्लिक गर्नुहोस् "होइन, धन्यवाद" जब एक भुक्तानी खाता सृजना गर्ने बारेमा सोधिएको छ। तपाईंको वचन पूर्ण छ!
Done! तपाईंले आफ्नो निर्णय स्वीकार गर्नको लागि तुरुन्तै तपाईंको आदेश कन्फर्मेसन ईमेल पाउनुहुनेछ! खेल्दै :)
हाम्रो फिर्ता नीति जारी छ तपाईले उत्पादन प्राप्त गर्नुभएको मितिबाट 30 दिनहरू (आई तपाईको स्थानीय डाक सेवा बाट साइन इन गर्नुहोस्)। यदि 30 दिन पछि देखि आएको छ भने, दुर्भाग्यवश हामी तपाईंलाई फिर्ता रकम वा विनिमय प्रस्ताव गर्न सक्दैनौं।
यदि गल्ती हामीमा छ (मिश्रित, आगमनमा खराब), हामी निश्चित रूपमा फर्काउने शिपिंगको लागि भुक्तानी गर्नेछौं :)
फिर्तीको लागि योग्य हुन, तपाईंको वस्तु अप्रयुक्त हुनु पर्छ र तपाईले प्राप्त गर्नु भएको अवस्थामा। यो मूल प्याकेजिङमा पनि हुनुपर्छ।तपाईंको फिर्ती पूर्ण गर्नको लागी, हामी एक रसीद वा खरिदको प्रमाण चाहिन्छ।कृपया तपाईंको खरिदलाई निर्मातामा पठाउनुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि फिर्ता डाक शुल्क हाम्रो द्वारा कवर गरिने छैन। हामी पूर्ण अन्वेषण विवरणहरूको लागि हाम्रो समर्थन टोली इमेल गर्ने सिफारिस गर्दछौं।
अर्डर रिटर्नको जाँचको लागि कृपया हाम्रो साइटमा सम्पर्क फारम मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्
तपाईंको अर्डरको खरिद गर्दा तपाईसँग तपाइँको अर्डर रद्द गर्नको लागी 24 घण्टा हुनेछ। यदि तपाईंले 24 घण्टा भित्र तपाइँको अर्डर रद्द गर्नुभयो भने हामी पूर्ण फिर्ती प्रदान गर्नेछौं। यद्यपि यदि तपाईले अर्डर गरे पछि 24 घण्टा बितिसकेको छ भने, तपाइँलाई हामीलाई फिर्ता गर्न सक्नु अघि तपाइँको पार्सल आइपुग्न पर्खनु पर्दछ।
एक पटक तपाईंको फिर्ती प्राप्त भएपछि र निरीक्षण गरिएको छ, हामी तपाईंलाई सूचित गर्नका लागि एक इमेल पठाउनेछौँ जुन हामीले तपाईंको फर्काएको वस्तु प्राप्त गरेका छौं। हामी तपाईंलाई तपाईंको फिर्तीको अनुमोदन वा अस्वीकृतिलाई सूचित गर्नेछौं।
यदि तपाइँ अनुमोदित हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईंको फिर्ती संसाधित गरिनेछ, र तपाईंको भुक्तानी व्यापारीको आधारमा दिनको निश्चित मात्रा भित्र, तपाईंको क्रेडिट कार्ड वा मौलिक विधि भुक्तानी स्वचालित रूपमा लागू हुनेछ।
बिर्सने वा मिस्सिङ रकमहरू
यदि तपाईंले अझै फिर्ता रकम प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, पहिले तपाईंको बैंक खाता फेरि जाँच गर्नुहोस्।
त्यसपछि तपाईंको क्रेडिट कार्ड कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्, तपाईंको फिर्ती आधिकारिक रूपमा पोस्ट गरिएको हुनाले केहि समय लाग्न सक्छ।
अर्को तपाइँको बैंकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्राय: रकम फिर्ता गर्नु अघि केही प्रोसेसिंग समय छ।
यदि तपाईंले यो सबै गर्नुभयो र तपाईंले अझै सम्म आफ्नो फिर्ती प्राप्त गर्नुभएको छैन, कृपया हामीलाई हाम्रो साइटमा सम्पर्क फारम मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्
Q- एक पोष्ट कोड अर्डर गर्न अनिवार्य छ तर मेरो देशमा एकसँग छैन। म कसरी आदेश राख्न सक्छु?
A- यदि तपाईंको ठेगानामा पोष्ट कोड छैन कृपया "11111" प्रविष्ट गर्नुहोस् र सामान्यतया तपाईंको अर्डर राख्नुहोस्। यस तरिका, हामी जान्दछ कि समावेश गर्न कुनै पोल कोड छैन
कसरी लामो समयसम्म प्रक्रिया गर्ने हो?
आदेशहरू सामान्यतया5दिन सम्म लाग्न अघि प्रक्रिया गर्नका लागी - सप्ताहांत र छुट्टिहरू छोडेर। प्रसोधन समयको समयमा प्रोसेस समय 14 दिन लाग्न सक्छ।
कसरी शिपिंग समय छ?
USPS र अन्तर्राष्ट्रिय आदेश मार्फत अमेरिकी आदेशहरू पठाइने छ भुक्तानी केन्द्रमा उत्पादनको आधारमा पठाइनेछ।
ट्रांजिट टाइम्स संयुक्त राज्य अमेरिका:5- 20 व्यापारिक दिन
अन्तर्राष्ट्रियमा ट्रांजिट समय: 10 - 21 व्यापारिक दिन
औसत ट्रांजिट समयहरू3हप्ताहरूमा प्राप्त हुन्छन्।
त्यहाँ परिस्थितिहरू छन् जुन नियन्त्रण बाहिर (प्राकृतिक आपदाहरू, बिदाहरू, मौसम, आदि) जुन शिपिंग स्थगन हुन सक्छ। धेरै प्याकेजहरू समयमै आइपुगेका छन्, त्यहाँ हुन सक्ने स्थिति र ढिलाइ हुन सक्छ कि हाम्रो क्यारियरहरूले अनुभव गर्न सक्छन्। यस कारणको लागि, हामी सही डिलीवरी समयको ग्यारेन्टी गर्दैनौं; वितरण मुद्दा शिपिंग कम्पनीको जिम्मेवारी हो।
म एक ट्रयाकिङ्ग नम्बर पाउनेछु?
प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन विश्वभर विभिन्न पूर्ति केन्द्रहरूबाट पठाइएको हुन सक्छ किनकि हाम्रो उत्पादन अनुसन्धान टोलीले गुणवत्ता र अझ सस्तो उत्पादनको स्रोतमा समय बिताउँछ। जब हामी तपाईंको उत्पादनका लागि ट्र्याकिङ प्रदान गर्न असक्षम छौं, हाम्रो कम्पनीले प्याकेजहरूमा पुरा तरिकाले बीमा गरेको छ र कुनै हराएको चीजहरू तपाईलाई नि: शुल्क पुन: प्राप्त गरिनेछ।
डाइरेक्टरी को लागी कस्तो प्रयोग गरिनेछ
कूरियर सेवा वास्तवमा हाम्रो पूर्ति केन्द्रमा निर्भर गर्दछ। यो किनभने किनभने हाम्रो उत्पादन विभिन्न देशबाट सुरक्षित गरिएको छ किनभने तपाइँले यसको लागि उत्तम मूल्य पाउनु भएको छ। कूरियर सेवा देशबाट देशमा भिन्न हुन्छ। कूरियर सेवाको साथ एक बलियो व्यापारिक स्थापना बिना हामी गतिको सन्दर्भमा सस्तो दरहरू प्राप्त गर्न असमर्थ छौं हामी अमेजन र यसका बारेमा विश्वव्यापी बजारमा हराउनेछौं।
यद्यपि, हामी अझै पनि तपाईंको प्याकेज प्राप्त गर्न र हराएको र गुमाएका प्याकेजको अवस्थामा तपाइँको प्याकेजमा बीमा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गर्नेछौं
मैले थप एक्सएमक्सक्स वस्तुलाई अनुगमन गरेँ, र मैले मात्र एक वस्तु पाएको छु, किन छ?
हामी आफ्नो अन्त मा लागत कम गर्न को लागि हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्छन ताकि तपाईं आफ्नो वस्तुहरु लाई प्राप्त गर्न को लागि उच्च गरेर / प्रीमियम को भुगतान गर्न को लागी छैन! यदि तपाईं हाम्रो साथ धेरै वस्तुहरूको लागि अर्डर राख्नुहुन्छ यो सम्भाव्य एक प्याकेज भन्दा बढी प्याकेजमा पठाइने भन्दा बढी छ। तपाईंको केहि वस्तुहरू आइपुगेको लागि केहि समय अनुमति दिनुहोस्।
के म उत्पादन मा कुनै पनि टैरिफ या कस्टम टैक्स चाहिए?
तपाईंको सम्बन्धित रसिदमा उल्लेखित मूल्यहरू सही तपाईले आदेश दिए बाट फरक हुनुहोस् तर चिन्ता नगर्नुहोस्! सामान्यतया हाम्रो पूर्ति केन्द्रले के गरिरहेको छ भने अत्यन्तै न्यून मूल्यको रूपमा चिन्ह लगाउन वा वस्तुहरू उपहारको रूपमा चिन्ह लगाउँदछ। यो टर्मिफहरू / निश्चित आयात शुल्कहरू निश्चित देशहरूका लागि तपाईंको अन्त्यमा खर्च भइरहेको छ यी थप शुल्कहरू अत्यन्तै महंगा छन्।
मैले एउटा आदेश दिएँ तर म एक कन्फर्मेशन ईमेल प्राप्त गर्न सकिन ... ... के भइरहेको छ?
कृपया अर्डर गर्नुहोस् कि तपाईंको अर्डर सही छ जब तपाईं आदेश राख्नुहुन्छ। तपाइँको स्पाम फोल्डर जाँच गर्नुहोस् कि यदि तपाईंको पुष्टिकरण ईमेल पठाइएको थियो भने हेर्नका लागि। यदि अझै पनि कुनै पुष्टिकरण इमेल छैन, कृपया हाम्रो समर्थन टोली हाम्रो साइटमा सम्पर्क फारम मार्फत ईमेल गर्नुहोस्
यदि म डिलिवरी को बिरुद्ध घर नहीं हूँ?
घरमा जो कोहीले ग्राहकको तर्फबाट प्याकेज प्राप्त गर्न सक्छन्। सामान्यतया डाक्यामले संग्रह पर्ची छोड्छ यदि कसैले घरमा नपुगेको हुन्छ र तपाईले तपाइँको नजिकको पोष्ट कार्यालयमा आफ्नो पार्सल सङ्कलन गर्न सक्नुहुनेछ।
म मेरो आदेश परिवर्तन गर्न चाहन्छु / ठेगाना, के म?
यद्यपि हामी हामीसँग उच्च आज्ञालाई प्रोत्साहन गर्दछौं कि तपाईसँग अर्डर राख्नु अघि ठेगानाहरू र ठेगानाहरू डबल गर्नुहोस्, हामी पूर्णतया बुझ्न सक्छौं कि चीजहरू आउन र गल्तीहरू गर्न सकिन्छ। हामी त्यहि दिनहरू राख्दछौं जुन तिनीहरू राखिएका छन्। यदि तपाईंको अर्डरमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भने कृपया हामीलाई हाम्रो साइटमा संपर्क फारम मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस् ASAP र हामी त्यो परिवर्तन समायोजन गर्न हाम्रो सबै भन्दा राम्रो गर्नेछौं, तर हामी कुनै पनि प्रतिज्ञाहरू गर्न सक्दैनौं। यदि वस्तुहरू पहिले नै हाम्रो पूर्ति केन्द्रबाट पठाइएको छ भने हामी क्रममा परिवर्तनहरू गर्न सक्दैनौं। त्यस अवस्थामा, तपाईं गलत वस्तुलाई निकटतम क्षेत्रीय गोदाममा पठाउन सक्नुहुन्छ र एक पटक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ हामी एक सहि वस्तु पठाउन सक्दछौं। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तपाईको देशको नजिकको क्षेत्रीय वेयरहाउस कहां हो।
म तपाईंको आदेश मा या तपाईंको स्टोर मा एक प्रश्न छ कि यहाँ यहां जवाब नहीं मिलयो, के म तिमीलाई एक धारक कसरि बनाऊँ?
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी तपाईंको कुनै पनि प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रसन्न हुनेछौं :)